Zeziphi iintlobo zefomathi yemifanekiso ekhoyo? | Abadali be-Intanethi
Zeziphi iintlobo zefomathi yemifanekiso ekhoyo?
Iris Gamen | | Idizayini yeMifanekiso, Ezahlukeneyo
Isigqibo sokuba yintoni uhlobo lomfanekiso Kufuneka ugcine ifayile yakho, inokuba yintloko ebuhlungu, ukuba iintlobo ezahlukeneyo zeefayile zomfanekiso azaziwa, kwaye unokugqiba ukugcinwa rhoqo kwifomathi efanayo "yokwesaba" ukuba iya kulahlekelwa umgangatho, ukuba ayiyi kuvula. ukuba igcinwe ngolunye uhlobo, njl.
Kule nto thumela siza kukufundisa ezona ntlobo zefomati yemifanekiso eqhelekileyo, kwaye uya kufunda ukuba ungayigcina njani imifanekiso yakho, nokuba yi-bitmap okanye imifanekiso eyenziweyo.
Into yokuqala esiza kukufundisa yona kweli nqaku ngumahluko okhoyo phakathi kwemifanekiso ye imifanekiso yebitmap kunye nevector, kwaye ke iintlobo zeefomati zomfanekiso ezingaphakathi kuzo.
1 Imephu yeBitmap vs umfanekiso wevektha
2 Iintlobo zeeFomathi zoMfanekiso weVector
2.1 ifomathi ye-AI
2.2 ifomathi yeSVG
2.3 Ifomathi ye-EPS
2.4 Ifomathi yePdf
3 Iintlobo zeefomati zomfanekiso webitmap
3.1 iJPG okanye ifomathi yeJPGE
3.2 Ifomathi yePNG
3.4 ifomathi yeGIF
3.5 Ifomati yePSD
4 Ingaba ikhona eyona fomati yomfanekiso?
Imephu yeBitmap vs umfanekiso wevektha
Kukho iintlobo ezimbini zemifanekiso, imifanekiso yebitmap kunye nemifanekiso yevector, ziifomati ezimbini ezahlukeneyo ngokupheleleyo, musa ukuzibhida.
Imifanekiso yeBitmap okanye umfanekiso we-raster Yenye yeefomati eziqhelekileyo esiya kuzifumana.
Ezi Imifanekiso yenziwe njengoko igama labo sele libonisa, ngeepixels, amachaphaza amancinci amaninzi. Ichaphaza ngalinye lala mancinci linikwa umbala, ngokusebenzisa ulungelelwaniso lweepixels zilungelelaniswe ngomnatha okanye igridi, kwaye ngaloo ndlela zenza umfanekiso. Okukhona i-pixels eninzi iqulathe umfanekiso, kokukhona isisombululo esiphezulu siya kubanaso.
Kulo mfanekiso siwubona ngezantsi sinokubona ukuba xa unyusa i-zoom ifoto ilahlekelwe ngumgangatho kwaye ibonakala i-pixelated.
Ngakolunye uhlangothi, sifumana imifanekiso ye-vector, kunjalo imifanekiso eyenziwe ngokusebenzisa ii-vectors. Yakhiwe ngokusekwe kwiipolygons ezenziwe ngamanqaku, athi ikhompyuter itolike kwaye iphawule umgama phakathi kwazo.
umfanekiso weVectorized, ayiphulukani nobulunga njengoko ziziqalelo ezinokulinganiswa yonke into oyifunayo, kwaye ngexesha lokuyigcina ihambelana nesisombululo esifuna ukusinika yona.
Sinokuyibona ngokucacileyo xa sisebenzisa isixhobo sokusondeza kwiikhompyuter zethu okanye iiselfowuni. Ukuba sithatha umfanekiso kwifomathi ye-bitmap, okukhona sikhulisa, kokukhona sibona i-pixelated, kwelinye icala, ukuba senza okufanayo ngomfanekiso owenziweyo, awuzukwenziwa pixelated. Ukuphakama kwesisombululo, oko kukuthi, inani leepixels esinazo, ngcono umfanekiso uya kujongeka.
Xa sele sizazi iintlobo zomfanekiso esinokuzifumana, siza kuthetha ngeentlobo zefomati yemifanekiso ephambili, apho sinokugcina khona iifayile zethu. Ukuthetha ngayo siza kwenza ulwahlulo, iifomati zemifanekiso ngaphakathi kwemifanekiso yevektha kunye neefomati zomfanekiso kwiibitmaps.
Iintlobo zeeFomathi zoMfanekiso weVector
Nje ukuba siyazi ukuba yeyiphi imifanekiso yohlobo lwevektha, siza kuhlalutya iifomati ezahlukeneyo ezikhoyo ukugcina imifanekiso yethu yeVector.
Ifomathi yomfanekiso we-AI yeyona ibonakala ukuba sisebenza nenkqubo ye-Adobe Illustrator, kuba yinkqubo yoyilo osebenza ngayo kunye ne-vectors. Yenye yeefomati ezisetyenziswa kakhulu xa usenza imifanekiso yevektha.
Xa ugcina ifayile kule nkqubo, okungagqibekanga kukuyigcina kwifomati ye-AI, yifayile yemveli yoMzobi. Kodwa asikuphela nje ukufumana le fomati yokugcina, inkqubo isinika iindidi ezininzi zokugcina ezihlonipha ii-vectors, ezifana nolwandiso lwe-EPS okanye i-bitmap, kuxhomekeke kwinto oyifunayo.
I-Scalable Vector Graphics, okanye njengoko yaziwa ngokudibeneyo, ifomathi yomfanekiso we-SVG. Yifomathi ethi kancinci kancinci yaziwe ngcono kwaye iyiyo iluncedo ekusetyenzisweni kwimidiya ye-intanethi njengoko ibonelela ngomgangatho omkhulu kwiifayile zayo.
I-SVG yifomati yevektha, ethetha ukuba injalo i-scalable, inobunzima obuncinci kwaye kwiisayizi ezincinci zisebenza ngokuchanekileyo.
Ifomathi evumela ukuba sivule ifayile kuyo nayiphi na inkqubo yoyilo ehambelanayo, umzekelo kwi-Adobe Illustrator. Iifayile ezikule fomati bayivektha ke baxhasa ukukala ngaphandle kokuphulukana nomgangatho. Isetyenziselwa ikakhulu ukugcina kunye nokushicilela imifanekiso.
Ngokuqinisekileyo uya kumangaliswa kukubona iPDF phakathi kweqela leefomati zemifanekiso evekisiweyo, kwaye kunokwenzeka ukuba uyinxulumanise nokugcina nokufunda amaxwebhu okubhaliweyo. Iifayile zePDF zinokusetyenziselwa ukugcina imifanekiso esekwe kwivektha ngokunjalo.
Iintlobo zeefomati zomfanekiso webitmap
Siyazi ukuba zeziphi iifomati ezine zemifanekiso yevektha, kwaye ngokulandelayo, siza kuzazi ezona ntlobo zisetyenziswayo zefomathi yemifanekiso yebitmap.
iJPG okanye ifomathi yeJPGE
Le fomati yenye yezona ziyaziwa kwaye zisetyenziswa ngabasebenzisi, kodwa kwakhona, yenye yezona zinto ziphulukana nowona mgangatho xa ugcina, ngenxa yoxinzelelo oluphezulu. Yifomati yomfanekiso we-raster, ekufuneka isetyenziswe xa ufuna imifanekiso encinci kwaye ingabinzima.
Ifomathi ye-PNG, ngokungafaniyo nale sisanda kuyibona, ibandakanya izinto ezicacileyo ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho, ngoko ke ngumba oyimfuneko xa ugcina iiprojekthi zakho. I-PNG inikezela ngoxinzelelo olungenakulahleka, ngaphezu kokugcina iinkcukacha ngombala kunye nokubonelela ngokufundeka okukhulu kumbhalo ogciniweyo.
Yenye yezona zinto zininzi isetyenziswe ekugcineni imifanekiso eneenkcukacha ezininzi, ayinayo ilahleko yomgangatho xa icinezela. Iqhele ukusetyenziswa kwiifayile zemifanekiso ezithi, emva kwenkqubo yokuhlela, ziprintwe.
Enye ifomathi ngaphakathi kwemifanekiso ye-raster yi-GIF, eyiixhasa oopopayi benza impembelelo enkulu yokubonwayo ngokudlala imifanekiso ngokuqhubekayo.
Le fomati ayisoloko ixhaswa zizo zonke izicelo, ngoko ke i-GIF ayinakudlala.
Ifomathi yePSD, njengoko igama layo libonisa, yeyenkqubo yokuhlela yeAdobe Photoshop, kwaye isetyenziswa ikakhulu kwimifanekiso yebitmap. Imifanekiso egcinwe kule fomati izakugcina iileya ezinoxwebhu olunalo. Enye yeengxaki kukuba ukuba awunayo inkqubo yokuhlela awuyi kukwazi ukuvula ifayile.
Ingaba ikhona eyona fomati yomfanekiso?
Ifomathi yomfanekiso ogqwesileyo iya kuxhomekeka kwiimfuno umntu ngamnye anazo kunye nomfanekiso asebenza ngawo kunye nenjongo yawo.
Njengoko sibonile, kukho iintlobo ngeentlobo zeefomathi zemifanekiso, apha siye sathetha ngeziphambili kodwa kukho ezinye, kwaye nganye kuzo inenjongo, kwaye kuxhomekeka kwinto oyifunayo, iya kuba enye okanye enye. Kuya kufuneka wazi apho umsebenzi wakho uya kuba khona, apho uza kuveliswa kwakhona kwaye uya kwazi ukuba yeyiphi ifomathi efanelekileyo kakhulu kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Zeziphi iintlobo zefomathi yemifanekiso ekhoyo?
Uyongeza njani iibhrashi kwiPhotoshop